Taxanaha XBD Vertical Long dhidibka Dabka saar
Taxanaha KQSS / KQSW Mashiinka Mashiinka Labaad
AY Taxanaha saliida qeybin
KZ Soo bandhigida Nidaamka Soo saarida Habka Petrochemical
KQSN Taxanaha Bambooyin Laba-nuugo ah
Iyada oo leh iska caabin abrasion ah oo wax ku ool ah iyo waxtarka sare, bamka taxanaha ah ee KXZ ayaa si gaar ah ugu habboon gaadiidka daabacaadda xoqan ee adag sida dhoobada macdanta iyo dhirta lagu dhaqo dhuxusha. Waxaa si weyn loogu adeegsadaa macdanta, metallurgy, dhuxul dhagaxda, awooda korontada, qalabka dhismaha, warshadaha kiimikada, daryeelka biyaha iyo meelaha kale.
KQW Masraxa Halbeegga Horizontal
Waxaa loo adeegsaday qaboojiyaha, kululaynta, biyaha nadaafada, daaweynta biyaha, qaboojinta iyo nidaamka qaboojinta, wareegga dareeraha, iyo biyaha qabow ee aan daxalka lahayn iyo gaadiidka biyaha kulul ee meelaha biyo bixinta, cadaadiska iyo waraabka. Dareenka adag ee dareeraha ah waa arrin, muggeedu kama badna 0.1% ee cabirka unugga, cabirka walxaha <0.2mm.
Waxyaabaha taxanaha ah ee KZJ waxaa si weyn loogu adeegsadaa birta, macdanta birta, diyaarinta dhuxusha, ka faa'iideysiga macdanta, alumina iyo mashaariicda baab'inta gaaska flue iyo nidaamyada durugsan. Waxaa inta badan loo isticmaalaa in lagu qaado slurry xoqan oo xoqan oo ay ku jiraan qurubyo adag, sida bamka quudinta ee miinada, gaadiidka waxyaalaha kala duwan, dabo galka, ka saarida jiqda ee dhirta korontada, ka saarida jiqda ee dhirta birta ah, gaadiidka dhuxusha. dhirta diyaarinta dhuxusha, warbaahinta culus, iwm. Isku-darka culeyska slurry wuxuu gaari karaa 45% madaafiic ah iyo 60% dhoobada macdanta ah.
D / MD / DF Mashiinka Masruufka Badan
D Horjoogayaal Heerarka Kala Duwan ee Kala Duwan, MD-ga oo xirxira adkaysi u leh heerarka kala duwan ee mashiinka dhuxusha iyo DF Corrosion-Resistant Multiultage Centrifugal Pump. Sababtoo ah adeegsiga tikniyoolajiyad casri ah iyo qaabeyn, D / MD / DF waxay leeyihiin faa'iidooyin badan. Waxaa loo isticmaali karaa barnaamijyo badan oo kala duwan.
DG / ZDG Mashiinka Quudinta Kuleylka
Taxanaha DG ee mashiinka cufan ee loo yaqaan 'multistage multirifage centrifugal pump' wuxuu isticmaalaa booliyaasha xiisadda si uu isugu xiro tubada biyaha, qaybta dhexe iyo qaybta ka bixista oo loo maro shey dhan. Waxaa loo isticmaalaa biyaha quudinta kuleeliyaha iyo biyo nadiif ah oo heerkul sare leh. Taxanahani wuxuu leeyahay noocyo badan oo kala duwan oo badeecooyin ah, sidaas darteed waxay leedahay adeegyo badan oo kala duwan. Sidoo kale, waxay leedahay waxqabad wanaagsan iyo waxtarka ka sarreeya heerka celceliska.
KQDP / KQDQ Mashiinka Kiciye
Model KQDP / KQDQ waa bambooyin kor u kaca oo heer sare ah. Keydinta tamarta, ilaalinta deegaanka, nabdoon oo la isku halleyn karo ayaa ah faa'iidooyinkeeda ugu weyn. Waxay u wareejin kartaa noocyo kala duwan oo dareere ah, waxaana loo isticmaali karaa biyo bixinta, cadaadiska warshadaha, gaadiidka dareeraha ah ee warshadaha, wareegga hawo qaboojinta, waraabka, iwm. xaaladaha.
Bamka Kiiska Kala Saara KQSN
Biyo sare, dhisida kahortaga dabka, wareega hawada ee hawo wareejinta biyaha, Biyaha wareega wareega biyaha ee nidaamka injineernimada, Wareejinta biyaha qaboojinta, Biyo kuleylka biyaha, Biyo warshadaha iyo dheecaan qaadista, Waraabka, dhirta biyaha, dhirta waraaqaha, dhirta korantada, kuleylka dhirta korontada, dhirta birta, dhirta kiimikada, mashaariicda ilaalinta biyaha, biyo gelinta meelaha waraabka, iyo wixii la mid ah.
Intaas waxaa sii dheer, adeegsiga walxaha u nugul u adkeysiga ama xirmooyinka u adkaysta waxay qaadi karaan biyaha wasakhda ah ee warshadaha, biyaha badda, iyo biyaha roobka oo ay kujiraan waxyaabo adag oo la joojiyay.
HD Taxanaha Gawaarida Wareegga Diagonal
Waxaa inta badan loo isticmaalaa warshadaha qufaca qaboojinta biyaha ku shuba matoorrada, biyaha badda ee ku faafa bambooyin ee dhirta milanka, matoorada uumiga ee gaaska dabiiciga ah ee dareeraha ah, iwm .Waxaa sidoo kale loo isticmaali karaa biyo siinta iyo bullaacadaha magaalooyinka, miinooyinka warshadaha iyo beeraha
LDTN / KNL Nooca Foosto Mashiinka Kondensate
1200-1600 ZLB, HLB Vertical Axial Flow Pump, Bambooyin Qulqulka Qulqulka
Bixinta warshadaha magaalooyinka iyo macdanta iyo bixinta bullaacadaha, injineernimada degmada, daaweynta bulaacada. Wareejinta iyo casriyeynta biyaha birta, metallurgy, dhirta korontada, dhismaha maraakiibta, dhirta biyaha, iwm. Mashaariicda daryeelka biyaha iyo maamulka webiga. Waraabka beeraha, dhul beereedka, beeraha milixda, iwm.
800-1000 ZLB, HLB Vertical Axial Flow Pump, Bambooyin Qulqulka Qulqulka
Bixinta warshadaha magaalooyinka iyo macdanta iyo bixinta bullaacadaha, injineernimada degmada, daaweynta bulaacada.
Wareejinta iyo casriyeynta biyaha birta, metallurgy, dhirta korontada, dhismaha markabka, dhirta biyaha, iwm.
Mashaariicda dhowrista biyaha iyo maamulka wabiga.
Waraabka beeraha, dhul beereedka, beeraha milixda, iwm.
350-700 ZLB, HLB Vertical Axial Flow Pump, Bambooyin Qulqulka Qulqulka
Bixinta warshadaha magaalooyinka iyo macdanta iyo bixinta bullaacadaha, injineernimada degmada, daaweynta bullaacadaha